NoFap အကယ်ဒမီရဲ့သတင်းလွှာကိုသင်မှာယူပါသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
သင် NoFap အကယ်ဒမီသတင်းလွှာပေးသွင်းပြီးရှိပါသလား?
အဆိုပါအကယ်ဒမီမေးပါ [နမူနာသတင်းလွှာ] ရည်းစားနှင့် hardmode ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့လဲ? , NoFap ရဲ့မသိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသတင်းလွှာဖတ်နေအခြားလူမှ hard Mode ကို NoFap ရဲ့စိန်ခေါ်မှုများတစ်လျှောက်လုံးပင်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူ, တမင်တကာအော်ဂဇင်ကနေရှောင်ဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။
တဦးတည်းကောင်းသော option တစ်ခုဖြစ်သည် karezza အရာအော်ဂဇင်မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကနေချေးတစ်ဦးရှင်းပြချက် / r / Karezza reddit အပေါ်:
Karezza အော်ဂဇင်မရှိဘဲပုံမှန်နေ့စဉ် Bond လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အနှောင်အဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုများ oxytocin generate နှင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်ရသူနှင့်ချိတ်ဆက်ခံစားရပါစေ။ orgasm ရှောင်ရှားခြင်းချိန်ခွင်လျှာအတွက် dopamine အဆင့်ဆင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အသစ်တခုမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိတဦးတည်းအတွက်အပြစ်အနာအဆာကိုရှာဖွေဖို့တိုက်တွန်းလျော့နည်းစေသည်။ Karezza ချစ်သူများမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံပေမယ့်ခဲ orgasm ခံစားရသည်။
၎င်းကိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများအတွက် ဦး နှောက်အတွက်တစ်ခါတစ်ရံကာရီဇာပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (သင့်အဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း) ဖြင့်ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ NoFap အသုံးပြုသူများအတွက်လုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် karezza မကြိုးစားမီအနည်းဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုအထိပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
တခြားအရာအားလုံးထက်အထက်, သင့်ရည်းစားနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သင်ယူပါ။ သူမ၏အဘို့အလိုအလြောကျကောင်းတဲ့အမှုအရာလုပ်ပါ။ သူမ၏တရားရုံးကို။ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနေ့စွဲအပေါ်သူမ၏ထွက်ကိုမေးပါ။ သူမ၏နှင့်အတူပုခက်လွှဲ။ သူမ၏နမ်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သူမ။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများရငျးနှီးထံမှလုံးဝသီးခြားညစ်ညမ်းရန်သင့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်။
အထက်ပါ၏အချို့ပေါင်းစပ်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်း karezza မှအပေါ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့လုံးဝ abstinent နှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါကိုမှန်ကန်လိင်စမ်းပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် porn အပေါ်နေသောရှာတွေ့ပါကပြန်မယ့်ခြေလှမ်းကို ယူ. နောက်တဖန်မကြိုးစားမီတစ်ဦးအနေဖြင့်စောင့်ဆိုင်းရန်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ရည်းစားရှိခြင်းစဉ်အချို့လူများက (ငါ့အ NoFap အကယ်ဒမီမိတ်ဖက်မာကု Queppet ပါဝင်သည်) လုံးဝလိင်ကြဉ်ရှောင်။ သင်ကစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်တစ်ခုခုကြောင်းအမှု၌ is ဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်လူများစွာလက်ထပ်ရတဲ့သည်အထိချွတ်ကိုင်ထားပါ။ ကြောင်း (ကသတ္တုတွင်းမဟုတ်ပါဘူး) သင့်အရာမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, ငါနေဆဲနီးပါးဆိုကို restart porn စှဲလမျးသူများအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအဘို့အ abstinence အကြံပြုလိမ့်မယ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စကားပြော။ အပြီးအစီးရိုးသားမှုကိုမဆိုအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးအတွက်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသူမ၏ဂရုစိုက်ဘယ်လောက်, သင့်ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမ၏ကိုပြောပြပါ, နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ သူမသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာသူမ၏ NoFap နှင့်အခြားညစ်ညမ်း-ပြန်လည်နာလန်ထူဝက်ဘ်ဆိုက်များပြပါ။ သူမအကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်အဘယ်အရာကိုမြင်ခြင်းနှင့်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေပါ။ ဆက်သွယ်ရေးအတူတကွရှေ့ဆက်ရွေ့လျားဘို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ recovery နှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိ!
ငါရုန်းကန်မှုများနှင့်အိမ်ထောင်ပြုစဉ်တပ်မက်စိတ်ကိုမည်သို့ကျော်လွှားရမည်ကိုလူအများသိချင်ကြသည်၊ လူသည်အရာအားလုံးကဲ့သို့ပြုမူတတ်သည့်အမှုများသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်၊ အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကရုန်းကန်နေရသနည်း ... သို့သော်၎င်းသည်စုံတွဲအများစုအတွက်မဟုတ်ပါ။
ငါသာယခုအကြောင်းကိုသုံးပတ်လက်ထပ်ခဲ့တာနေစဉ်, ငါနီးပါးငါးနှစ်ခွဲအဘို့အကြှနျုပျ၏ဇနီးနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ရောက်ခဲ့ဖူးနှင့်ဤအလွန်ပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုလေ့လာငါ့အဘို့ကြီးမားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအရပ်၌များစွာသောရှုထောငျ့ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာချသင့်ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အခြားသူများ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအသိအမှတ်ပြုထံသို့မရောက်ရ။
ငါ "တပ်မက်ခြင်း" သည်များသောအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးရှိမှုဟုထင်မြင်ယူဆသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ မင်းဟာမင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မယုံဘူးဆိုရင်သင်နှစ်သက်တဲ့သူကိုကြည့်ပြီး“ ငါသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံမှသာငါအရမ်းပျော်လိမ့်မယ်” လို့စဉ်းစားနိုင်တယ်။ အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းသည်သင်ဆွဲဆောင်သူတစ် ဦး အားသင်နှင့်အတူမရှိကြောင်းတွေ့သောအခါ“ ငါမလုံလောက်ဘူး။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သိက္ခာ "ငါသည်လူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုအဖြစ်ခြွင်းချက်မရှိတန်ဖိုးနှင့်ထိုက်တန်ပြီ" ဟုသူသင်နှင့်အတူလိင်ရှိသည်သို့မဟုတ်နဲ့အတူလိင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းကျိုးနပ်မ bearing ရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ။ ကြောင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကနေသို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သငျသညျဖွစျခငျြလူတစ်ဦး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
တဏှာကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်း၏အခြားတစ်ဝက်မှာသူတစ်ပါး၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်၏ဇနီးနှင့်သင်“ တပ်မက်သောစိတ်” ရှိသူများ။ အခြားအမျိုးသမီးများကိုကြည့်သောအခါ၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် - ၎င်းတို့ကိုတကယ့်လူများအဖြစ်ရှုမြင်ရန်၊ တကယ့်ခံစားချက်များနှင့်တကယ့်တန်ဖိုးရှိမှုအားဖြင့် - အပျော်အပါးအတွက်ပစ္စည်းများမဟုတ်ပါ။ သင်၏ဇနီးကိုကြည့်သောအခါသူမ၏တန်ဖိုးကိုလေးစားရန်နှင့်သူမနှင့်ဆက်ဆံရန်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
အသားပေး NoFap Quote
သင်တို့သည်ဤသတင်းလွှာသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ့ဆုံရန်ကူညီရန်တိုးတက်နိုင်ဘယ်လိုမဆိုတုံ့ပြန်ချက်ရှိပါက, ဒီအီးမေးလ် reply အခမဲ့ခံစားရပါ။ လာမယ့်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်, ငါတို့ဘဝ porn-အခမဲ့အသက်ရှင်ရန်သင်သည်သင်၏ခရီးအတွက်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။
အလက်ဇန်းဒါး Rhodes နှင့် Mark Queppet
ယခင်ဆောင်းပါးမူပိုင်ဖြစ်ပါသည်© NoFap အကယ်ဒမီ LLC, မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ NoFap℠အလက်ဇန္ဒား Rhodes ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ service ကိုအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီး NoFap LLC။ NoFap အကယ်ဒမီ၏သတင်းလွှာကိုရယူရန်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြည့်စွက်ပါ NoFapAcademy.com။ သူတို့ရဲ့လည်းထုတ်စစ်ဆေး ယူကျု့ချန်နယ် porn ဖြတ်အပေါ်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များသည်။